कसरी अन्य संचालक गर्न फोन "मेगाफन" अनलक गर्न? सिद्ध विधि
कम मूल्य मा बन्द फोन को तथाकथित किन्न जो "मेघाफोन" को सदस्यहरू, कहिलेकाहीं अर्को अपरेटर बाट सम्झौता स्मार्टफोन सिम कार्डमा स्थापना गर्न चाहन्छौं। निस्सन्देह, केही तिनीहरूले छैन, र यो फोन जडान भेट्टाउने छैन। र यो अपरेटर सेटिङहरू को पनि एक मार्गदर्शन चयन गर्न मद्दत गर्दैन।
अपरेटर अन्तर्गत zalochenny फोन के हो?
अवधि जो "महल" मतलब अंग्रेजी शब्द लक देखि गए भने। त्यो zalochenny फोन छ - "लक" र केवल साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ - सिम कार्ड विशिष्ट अपरेटर। त्यसैले, यदि zalochenny को "मेघाफोन" स्मार्ट सम्मिलित सिम कार्ड अन्तर्गत, उदाहरणका लागि, भोडाफोन, त्यसपछि यो फोन काम गर्ने छैन। बरु, उहाँले हुनत सम्पूर्ण माध्यमिक कार्यक्षमता उपलब्ध (संगीत, क्यामेरा, वाइफाइ इन्टरनेट, आदि) हुनेछ, जडान भेट्टाउने छैन। यो सिम कार्ड को लागि कुनै स्लट र अरू धेरै छैन संग एक मिनी-ट्याब्लेट जस्तै हुनेछ, त्यसैले यसलाई कसरी अन्य संचालक गर्न "मेघाफोन" बाट फोन अनलक गर्न सिक्न प्रयोगकर्ताहरूको तार्किक इच्छा छ।
यो किन छ?
कम्पनी एक कम मूल्य मा बजार को लागि प्रतियोगिता मा "मेघाफोन" करार स्मार्टफोन आपूर्ति। र तिनीहरूले मात्र "मेघाफोन" को सबै भन्दा लागि धेरै सुविधाजनक छ जो यस संचालक सिम कार्ड, को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक पटक zalochenny बिक्री सस्तो फोन, वाहक लागि धेरै वर्ष गर्न साइन एक विवरण को ग्राहकहरु जो सक्दैन गो corny अन्य संचालक (अर्थात्, प्रतियोगिहरु)। यो बजार विकास गर्न एकदम चलाक र प्रभावकारी तरिका हो, र यो मात्र होइन रूस मा तर पनि संसारभरि थुप्रै अन्य देशहरूमा अभ्यास छ। त्यसैले यो नयाँ के केही छ।
अनलक गर्न सम्भव छ?
यस्तो फोन को धेरै मालिक कसरी अन्य संचालक गर्न "मेघाफोन" बाट फोन अनलक गर्न चाहन्छौं। निस्सन्देह, यो सम्भव। हुनत विधिहरू को सुधार सुरक्षा, आज त्यहाँ धेरै प्रभावकारी तरिकामा गर्न अनलक गर्ने "मेघाफोन"। तिनीहरूलाई को एक तल देखाइएको छ। तर, उपलब्ध छैन यी सबै कदम त तपाईं आफ्नो जोखिममा गर्दै खुला स्मार्टफोन ग्यारेन्टी मा चेतावनी पर्छ।
कसरी अन्य संचालक आफ्नो फोन मेघाफोन अनलक गर्न?
तल वर्णन प्रक्रिया मात्र Windows732 बिट संग सम्भव छ। सुरु गर्न, हामी इन्टरनेट जोडिएको कुनै पनि उपकरणमा भण्डारण र फाइलहरू स्थानान्तरण लागि फाइल डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। यसलाई "Yandex.Disk" मा उपलब्ध छ। कि पछि प्रणाली ड्राइव सी को मूल गर्न संग्रह सामग्रीहरू प्रतिलिपि:
रन vcredist_x86.exe (आवश्यक स्थापना Microsoft दृश्य सी ++) फाइल।
पाठ फाइल IMEI चलाउन (यो लगइन \_ तस्बिरहरू मा स्थित छ \_ imei.txt)। तपाईंको फोनको आईएमईआई मा फिटिंग। यो ब्याट्री अन्तर्गत स्थित, वा बक्स मा छापिएको छ। तपाईं पनि फोन * # 06 # मा कुञ्जीपाटी सर्टकट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ।
कागजात बन्द गर्नुहोस् र परिवर्तन बचत गर्नुहोस्।
फोन बन्द गर्नुहोस्, ब्याट्री हटाउन, पीसी गर्न USB मार्फत आफ्नो फोन जडान, ब्याट्री फिर्ता घुसाउनुहोस्।
कम्प्युटर अज्ञात उपकरण पत्ता लगाउन हुनेछ। पैक सी: \_ लग इन \_ चालक एक चालक छ। अज्ञात उपकरण स्थापना जब तपाईं यो निर्देशिका निर्दिष्ट गर्नुपर्छ।
नयाँ व्यवस्थापकले COM पोर्ट उपकरणहरू हुनेछ। यसको मूल्य छ हुन सम्झना।
फोन बन्द, फेरि ब्याट्री हटाउन।
रन FlashTool.exe फाइल (सी मा स्थित: \_ लग इन \_ flashtool \_)।
कार्यक्रम खुल्छ। मेनु वस्तु बायाँ (वर्ण) मा क्लिक गर्नुहोस्। उहाँले त्यहाँ एउटा मात्र छ।
को, खोल्दछ विन्डो लाइन मा मा DIAG 1 तपाईं पहिले कण्ठ गर्ने COM पोर्ट नम्बर चयन गर्नुहोस्।
प्रेस "ठीक" बटन, त्यसपछि "??" बटन। कार्यक्रम जवाफ "तयार" दिनुहुनेछ।
फेरि आफ्नो फोन, आफ्नो पीसी जडान ब्याट्री घुसाउनुहोस्। फर्मवेयर स्थापना गर्न स्वतः सुरु गर्नुहोस्।
स्थापना पूरा भएपछि,, ब्याट्रि हटाउन सेटअप कार्यक्रम बन्द गर्ने स्मार्टफोन बन्द।
फोन अनलक कोड "मेघाफोन" माग्यो भने (र माग गर्न सक्दैन), यो 191519373892 प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
डाउनलोड र निर्देशनका लागि "मेघाफोन" को आधिकारिक साइटबाट फर्मवेयर स्थापना गर्नुहोस्।
मा बन्द मोड स्मार्टफोन सुरुवात पुन। यो गर्न, साथ पावर बटन र मात्रा साथै पकड (पावर छ केही फोन मा र मात्रा बटन कम)।
(ध्वनि बटन द्वारा सारियो) "डाटा \_ कारखाना rese खाली" र पावर बटन प्रयोग गरेर यसलाई सक्रिय गर्न विकल्प चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि "मेटाउनुहोस् सबै प्रयोगकर्ता डेटा"।
पूरा भएपछि "पुन: बुट प्रणाली डाटा" चयन गर्नुहोस्।
यो प्रक्रिया पूर्ण छ। फोनमा स्विच पछि कुनै पनि सिम कार्ड, अब काम गर्नेछ जो सम्मिलित गर्न सम्भव छ। सुरुमा, यो कि फोन, यो विधि कठिन गरेर अन्य संचालक लागि "मेघाफोन" लगइन अनलक लाग्न सक्छ, तर यो छैन। बस यी बुँदाहरू पालना र सफल।
चाहे त्यो खतरनाक छ?
अब तपाईं अन्य संचालक गर्न फोन, "मेगाफन" कसरी अनलक गर्न थाहा छ। तपाईं गलत कुरा के छ भने, यो किनभने तपाईं बस सफ्टवेयर बिगार्न सक्छ, त्यसपछि यसलाई असफल वा समावेश गर्न बन्द हुनेछ, खतरनाक हुन सक्छ। त्यसैले, यो अन्य संचालक गर्न फोन, "मेगाफन" ठ्याक्कै कसरी अनलक गर्न र फाइदा र बेफाइदा वजन थाहा महत्त्वपूर्ण छ। सायद पनि पछि असफल फर्मवेयर तपाईं फर्कन मूल राज्य, तर त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी। यसबाहेक, हामी फेरि सम्झाउने: खुला स्मार्टफोनका प्रत्याभूति छैन।
तर धेरै प्रयोगकर्ताहरू यस्तो अनलक विधि बारे सकारात्मक छन्। तर कुनै एक सफलता ग्यारेन्टी। जिम्मेवारी तपाईं सम्पूर्ण निहित भनेर नबिर्सनुहोस्। हामी यस कार्यका मात्र तपाईं शुभकामना इच्छा गर्न सक्नुहुन्छ।
स्मार्टफोन Etuline ENSO S5084B काला: ग्राहक समीक्षा
"नोकिया 130": विशेषताहरु र ग्राहक समीक्षा
IPhone6र 6s - फरक के? वर्णन, विशेषताहरु
म एउटा iPhone 5s किन्न गर्नुपर्छ? यो मोडेल को लाभ के हुन्?
Shockproof विनिर्देश मोबाइल फोन: विवरण र विशेषताहरु
Slabs फर्श। जापोरोझे थप कोर्ट अन्य कोटिंग्स टाढा
होटल स्मोलेन्स्क: नाम, ठेगाना, समीक्षा र फोटो
घरमा पेडीक्योर कसरी गर्न
आफ्नै हात संग रूखहरू पात बाट फूल: चरण फोटो द्वारा चरण संग मास्टर वर्ग
समीक्षा, विनिर्देशों, मूल्य: "Izidri" ड्रायर। "Izidri" - तरकारी र फल लागि विद्युत driers
तपाईं अवसाद छ भनेर कसरी थाहा छ? लक्षण र लक्षण
सही व्यक्ति। आदर्श वा biorobot?
LAK khinkal कसरी खाना पकाउनु
किन पानी डराएका बिरालोहरु छन्